Itoobiya iyo ONLF oo heshiis kala saxiixday – AwKutub News
Itoobiya iyo ONLF oo heshiis kala saxiixday
By awkutubnews October 22, 2018
Leave a Comment on Itoobiya iyo ONLF oo heshiis kala saxiixday
Magaalada Asmara ee dalka Eritrea waxaa heshiis ka kooban saddex qodob ku kala saxiixday dowladda federaalka Itoobiya iyo jabhadda ONLF.
Wasiirada arriimaha dibadda Dr Workneh Gebeyehu iyo maaliyadda Axmed Shide iyo madaxweynaha Dowlad deegaanka Soomaalida Mustafe Muxumed Cumar, ayaa dhanka dowladda federaalka Itoobiya ku matalayay heshiiskan, halka Jabhadda ONLF ay ka socdeen, gudoomiyaha ONLF Maxamed Cumar Cismaan iyo xoghayaha guud ee ururka Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Mahdi.
Afhayeenka ONLF Cabdiqaadir Xassan Hirmooge ayaa sheegay in dood dheer kadib labada dhinac ay ku heshiiyeen qodobada kala ah in colaadda la joojiyo iyo in ONLF ay sii wadan karto halgankii iyo ujeedooyinkii ay u halgamaysay si nabad ah iyo la dhiso guddi ka kooban labada dhinac.
Jabhadda ONLF ayaa muddo dheer dagaal kula jirtay dowladda federaalka Itoobiya iyadoo dagaallo galaftay nolosha dad badan labada dhinac ay ku dhaxmareen dhulka Soomaali Galbeed.
Baarlamanka Itoobiya ayaa liiska argagixisada ka saaray jabhadda ONLF, OLF, Gimbot 7 iyo kuwa kale oo ka dagaalami jiray Itoobiya iyadoo hadda dowladda ay inta badan heshiis nabadeed la saxiixatay jabhadahan.
Tags: DDS heshiis Itoobiya ONLF Soomaali Wararka
Previous Entry Dilka Khashogji : Beesha caalamka oo Faahfaahin dheraad ah ka sugaysa Sacuudiga
Next Entry Xaggee marayaa baadhitaankii dilka Khashogji?